အသက်ဝင်ပြီးတဲ့ လျှပ်တပြတ် ရိုက်ချက်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » အသက်ဝင်ပြီးတဲ့ လျှပ်တပြတ် ရိုက်ချက်..
အသက်ဝင်ပြီးတဲ့ လျှပ်တပြတ် ရိုက်ချက်..
Posted by ဆူး on Oct 14, 2010 in Other - Non Channelized, Photography | 31 comments
ဆူး စိတ်ကူး ပုံကောင်းလေးတွေ
စင်ပေါ်မှာ အဆိုတော်တွေ မင်္ဂလာပါ လုပ်သလိုဘဲ.. ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ လူကနေ တဆင့် ကြည့် နေတဲ့ လူတွေ အားလုံးကို မင်္ဂလာပါ လုပ်နေတယ်။
မိဘ မေတ္တာနဲ့ လွမ်းခြုံလို့ အနွေးဓါတ်တွေ ပေးထားတာ..
ဗိုက်ဆာနေတဲ့ ကလေးအတွက် မိဘရဲ့ မပျက်ကွက်တဲ့ မေတ္တာနဲ့ ကျွေးမွေးနေတယ်။
သူလည်း ကလေးတွေ အတွက်ဘဲလား.. အောက်က ငါးကလေးကတော့ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေတယ် လို့ ခံစားမိတယ်။
ဒီအကောင်လေး ကြည့်တော့လည်း ငယ်ငယ်က ဒီနေရာ ငါနေရာ ဆိုပြီး ရွယ်တူတွေ အချင်းချင်း နေရာဦးတာကို သတိရမိတယ်။
သေမှာကို မသိရှာဘဲ ခပ်တည်တည် နေနိုင်တာ.. ငှက်ကလေးရဲ့ သေမင်းက အနောက်မှာ တင် ရှိနေတာ.. လူသားတွေလည်း ဒီလိုဘဲ..
ပုံပြင်တွေ ထဲကလို ချစ်ကြည်ရေး များ လုပ်နေလား မသိဘူး
လူတွေ ဒီကို လာလာ ချောင်းကြည့်တာ ဘာရှိလဲ မသိဘူး ဆိုပြီး စူးစမ်းနေတဲ့ မျောက်ကလေး..
ဒီငါးကလေး မိသားစုတွေ ကို စိတ်မချဖြစ်နေတဲ့ မျက်လုံးမျိုးဘဲ
အရှေ့က မိခင် လုပ်သမျှ လိုက်အတု ခိုးနေတာ.. အတုခိုးတဲ့ ပညာ သူတို့ကမှ တကယ်တော်တာ..
ရုပ်တော့ ဆိုးတယ်.. အရောင်တွေ စုံလို့ တော်တော်လှနေတယ်နော်..
သန်းတွေ လိုက်ရှာပေးတဲ့ ငှက်ကလေးတွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတာ များလား..
ဒီအကောင်တွေ ကြားမှာ ကြောင်ကလေးက ဘာဝင်လုပ်တာလဲတော့ မသိဘူး.. ဒီပုံကတော့ အစစ်လို့ ထင်တာဘဲ..
သစ်ရွက်ခြားပြီး တကောင်နဲ့ တကောင် ရှာနေကြတာ များလား..
ကြွက်ကလေး သနားပါတယ်.. လွတ်အောင်လည်း ပြေး အစာလေးလည်း ပြုတ်မကျအောင် ထိန်းရတာ.. ကြွက်ကလေး ခမျှာ.. အသက်လုနေရတာ..ကြောင်ကတော့ လောဘနဲ့ လိုက်ဖမ်းတာ.. ကြောင်က မမိလည်း အရေးမကြီးပေမဲ့ ကြွက်တော့ မိရင် သေမှာ.. မသေမရှင်နဲ့ ညှင်းခဲပြီး ကြောင် ဆော့ခံရမှာ..
အကောင်ငယ်ပေမဲ့ အထင်မသေးနဲ့ သူလည်း ယင်ကောင်ထင်တယ် ဟပ်နေတာ..
အမေကြီးက ခွေးလေးကို အုပ်ပေးထားတော့ ကလေးက မနာလိုဖြစ်နေပြီ..
အကောင်သေးတယ် ဆိုပြီး အထင်မသေးပါနဲ့.. ကျွှန်တော် အားနဲ့ အပင်လေးတောင် ကိုင်းသွားပြီ.. ဒါတောင် လက်တဖက်တည်းနော်..
အမေကြီးက အားငယ်နေတဲ့ ကလေးကို အားပေးနေသလိုဘဲနော်..
အထီးကျန် ငှက်တကောင်လို ဖြစ်နေပြီ..
ပျံနေရင်းနဲ့.. အန္တရာယ်ဆိုတာ ရှိနိုင်တယ်
အပေါ်က ခုံချတာနဲ့ ဗိုက်ထဲ တန်းနေတာဘဲ.. သေမင်းကို အံတုနေရတာဘဲ..
ယုန်ကလေး သနားပါတယ်.. အသက်လုနေရတယ်.. လွတ်နိုင်ပါ့မလား..
ဘာ ဘဲလဲတော့ မသိဘူး.. ခေါင်းတော်တော် လှတာဘဲ.. အရောင်တော်တော် တောက်တယ်နော်..
ဖားကလေးက အမှောင်ထဲမှာ မမြင်တာလား အရှေ့က ဘာလဲ ပြူးပြီး ကြည့်နေတဲ့ လျှပ်တပြတ် အချိန်များလား..
သဘော ကျ တယ် နေ ချင် တယ် …. ကျည် ဘယ် လောက် လောက် ကုန် မ လဲ ဟင် .. အီ ရတ် မှာ သွား ကောက် မ လို . ။
ဂိုထောင် တလုံးစာ ဆို ရပါပြီ.. ကျည်ဆံ အိမ်ဆိုတော့.. လိုအပ်ရင်.. ဖြတ်ပြီး ပြစ်ယုံဘဲ..
ကျည်ဆံနဲ့ အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် အတိတ်နိမိတ်မကောင်းလိုက်တာကွယ်.. ကြောက်စရာကြီးပါ…။
ဆရာရေ.. ကောင်းတဲ့ ဘက်က စဉ်းစားလိုက်လေ.. ကျည်ဆံတွေ အိမ်ဆောက်လိုက်တော့ လူသတ်ဖို့ အတွက် လက်နက်မဟုတ်တော့ဘူးလေ.. ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ လမ်းစပါ..
ဗလီပုံနဲ့ church ပုံနဲ့ တူတယ် ။ အိမ်နဲ့လုံးဝမတူဘူး ။
ကြည်ဆံဖူးတွေက ပြွတ်သိပ်နေတာပဲ ကြည့်ရတာတော် ကြက်သီးထတယ် ။
ဘယ်လိုဖြစ်လဲ မသိဘူး.. ကျည်ဆံ ပုံတွေ တင်ထားတဲ့ ပိုစ်နေရာမှာ ထပ်ပြီး လာပြန်ဝင်နေပါလား.. မသိတော့ဘူးကွယ်..
Etone လည်းဖြစ်ဖူးတယ် အဲ့ဒါမျိုးလေ ။
ကိုယ်ကတော့ new post လုပ်လိုက်ပေမဲ့ပထမရေးထားတဲ့ဟာကအောက်မှာရှိနေတယ် select လုပ်ကြည့်မှသိရတာ ။ မဟုတ်ရင်အဖြူရောင်ပဲမြင်ရတာ ။ ဒါကြောင့်နောက်ပို့စ်တစ်ခုထပ်ရေးတော့ ထပ်ကုန်တာ ။ ဒါနဲ့ ဆူးတို့ connection ကောင်းပုံပဲ ပုံတွေများကြီးတင်လုိ့ရတယ် ။ ဒီမှာ တစ်ခုထဲတောင် မနက်ကတည်းက အဆင်မပြေဘူး ။
ကွန်နက်ရှင်ကောင်း မကောင်းတော့ မသိဘူး မနေ့က အသည်းအသန် ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်ထားတာ.. ဒီနေ့တော့ လွယ်လွယ်ကူကူ လင့်ချိတ်ပြီး တင်လိုက်တာ.. မန်းလေးဂေဇတ် ဆာဗာထဲတော့ တင်ဖို့ ဆိုတော်တော် မလွယ်တာ.. အရင်က အဲဒီလို တင်တာ.. အဆင်မပြေလို့ ပုံတင်ရမှာတောင် လန့်နေတာ.. နောက်မှ နီးသိသွားလို့ လွယ်သွားတာ..
ကျည်ဆံတွေရော အီရတ်တွေရော ကျွန်တော်တော့
တစ်ခုမှမတွေ့ဘူး၊ တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ ချစ်စရာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာပုံလေးတွေပဲတွေ့တယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရှာရှာဖွေဖွေတင်ပေးထားတာ
ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ကုန်လို့.. စိတ်လျော့ပါနော်..
ကျနော်က ဒီလိုပုံလေးတွေရရင် ကျနော်ကွန်ပြူတာမှာ စကရင်ဆေးဗာလုပ်ပြီးအလှကြည့်ပါတယ်။
လှ တယ် ဗျာ … ပုံ တွေ ကို ပြော တာ နော် .. တင် တဲ. လူ ကို ပြော တာ မ ဟုတ် ၀ူး ။။
အကောင်ပုံတွေကနေကျည်ဆံတွေဖြစ်ကုန်ပါလား။ ကောင်မလေးပုံတွေတင်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးနော်။
ဆူး ပြန်စစ်တာတော့ အကောင်ပုံလေးတွေဘဲ ကျည်ဆံ ပုံမတွေ့ဘူး..
အရမ်းလှပြီး အသက်ဝင်တယ်………. ဒါပေမယ့် ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းပုံတွေများနေတယ်
comment တွေမြင်မှလန့် သွားတာ !!
ဒီဓါတ်ပုံတွေက ဆူးမမ တင်ပေးတာပါ။
ဒီနေ့မှ ဓာတ်ပုံလေးတွေ အရသာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ယခင်နေ့တွေက ကွန်မကောင်းတော့ စုံအောင် မမြင်လိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..။
ကဗျာရေးလို့ သရုပ်ဖော်ပုံလိုရင် ယူသုံးခွင့်ပြုပေးပါ။ ကြိုတင်ပြီး ခွင့် တောင်းထားပါရစေ..။
အင်တာနက်မှာ အများကြည့်ဖို့ တင်ပေးထားတာ ဆိုတော့ စမ်းချောင်းထဲမှာ စီးနေတဲ့ ရေလို သဘောထားပြီး ခပ်ချင်သူတွေ ခပ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ပါ၏။ ဆူးလည်း တွေ့လို့ တင်ပေးတာ
လူတွေ ဒီကို လာလာ ချောင်းကြည့်တာ ဘာရှိလဲ မသိဘူး ဆိုပြီး စူးစမ်းနေတဲ့ မျောက်ကလေး.. ကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ….ဗျာ
တော်တော် စပ်စု ပ……
ဆူးရေ ပုံလေးတွေ ကူးယူပါရစေနော်။ ကျေးဇူးနော်။ ကြောင်ကလေးပါတဲ့ ပုံ ကြိုက်တယ်။
ရွာတော်ရှင့် ကိုကို့ ကို ပါ
ပေ့ ကိုကို ရော ပေါ်သေးဝူးလားဗျ ：D
ပေ့ ကိုကို တော့ မလာနိုင်ဘူး ပေ့ ဖေဖေ ပေ့ မေမေ ဆိုပြီး လာလိမ့်မယ် ကြိမ်လုံးကိုင်ပြီးတော့။
ကျည်ဆံ ဆိုလို့ လိုက်ရှာနေတာ ပုံလှလှလေး တွေပဲတွေ့ပါတယ် ။
ကျနော်လဲ ပုံတင်တတ်အောင် ကြိုးစားရပါဦးမယ်၊
အမတို့ တင်ထားတဲ့ပုံ ကိုကြည့်ပြီး အားကျလိုက်တာ ။
ပေ့ ကိုကိုတော့ မသိဘူးဗျာ။
ပေ့ မမ ကတော့ ရှိတယ်နော်